कांग्रेसबाहेक सबै दल एमसीसीको विपक्षमा ! | Nepal Ghatana
कांग्रेसबाहेक सबै दल एमसीसीको विपक्षमा !
प्रकाशित : ४ पुष २०७८, आईतवार १९:१०
आज बसेको सर्वदलीय बैठकमा एमसीसीबारे व्यापक विरोधको भएको छ । संसदमा रहेको गतिरोध हटाउने तथा एमसीसीबारे साझा धारणा बनाउने प्रयासस्वरुप आइतबार भएको सर्वदलीय बैठकमा कांग्रेस बाहेकका सबै दलले एमसीसी पास गर्न नहुने तर्क गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा काँग्रेस बाहेकका सबै दलले एमसीसीको विपक्षमा आफ्नो धारणा राखेका छन् । काँग्रेसबाहेक संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने अरु दलले एमसीसी हुबहु पारित गर्न नसकिने धारणा राखेको बैठकपछि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले जानकारी दिए ।
एमसीसी बारे कसले के भने ?
बैठकमा सहभागी सुवालका अनुसार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसोधनबिना एमसीसी पारित गर्न नहुने धारणा राखेका थिए । माओवादीको अर्का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि पारित गर्न नहुने धारणा राखेका थिए ।
एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट बोलेको नेता बेदुराम भुसालले भने पनि संसोधनबिना पारित गर्न नहुने धारणा राखे । जसपाका बाबुराम भट्टराईले भने एमसीसी अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
त्यस्तै बैठकमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसबाट रामचन्द्र पौडेल र रामशरण महत बोलेका थिए । उनीहरु दुवैले एमसिसी अगाडि बढाउनुपने पक्षमा धारणा राखेका थिए ।
बैठकबारे जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने एमसीसीबारे फेरि छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने सहमति बनेको बताए । ‘संसद अवरोध र एमसिसीबारे व्यापक छलफल भयो । फेरि छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने सहमति भएको छ’ पत्रकारहरुलाई उनले भने ।
आर्थिक सहयोग राष्ट्रको हितमा हुनुपर्छ, पाँच दलले एमसीसीबारे साझा धारणा बनाऔँ
यथास्थितिमै एमसीसी सम्झौता पारित गर्न नसकिने निष्कर्षमा माओवादी केन्द्र
अमूर्त जवाफ एमसीसीबारे प्रचण्डको– ‘धेरै बोल्दा देश खतरातर्फ जान्छ, पार लगाइन्छ’